“သုမေဓာရှင်ရသေ့ ဘုရားဆုပန်တယ်” ဆိုတာကို အသေအချာ လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်… ဟို…မြတ်စွာဘုရားရှင် အဘိဓမ္မာတရား ဟောပြီးလို့ တာဝတိံသာကပြန်မြန်း ဆင်းသက်လာစဉ်တုန်းက ဘုရားရှင်ရဲ့ ဘုန်းတန်ခိုး အာနုဘော်တွေ ကို မျက်ဝါး ထင်ထင် မြင်တွေ့ကြရတဲ့ ဗိုလ်ပါပရိသတ်တွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ “ဘုရား ဖြစ်ချင်လိုက်တာ”ဆိုတဲ့ တောင့်တမှု၊ တောင်းခံမှုမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။
လေသာဆောင်ပေါ်တွင် ဘုရင်ကောသလနှင့်မိဖုရားမလ္လိကာတို့ မင်းလမ်းမကြီးဘက် ငေးကြီရင်း ထိုင်နေကြသည်၊ စိတ်ချလောက်သော နေရာဖြစ်သဖြင့်အစောင့်အရှောက်တို့က ဝေးရာတွင်ရှိနေသည်၊ ဘုရင်ကောလသက တိုးတိုးတိတ်တိတ် မလ္လိကာနားကပ်သွားပြီး တိုးတိုးလေး“မလ္လိကာ“ ဟုခေါ်လိုက်သည်၊ “မောင်တော်ဘုရား“ဟုပြန်လည်လျှောက်တင်ရင်း မင်းလမ်းမဘက်လှည့်ထားသောမျက်နှာတော်ကိုဘုရင် ကောသလဘက် လှည့်လိုက်သည်
ဤသုတ္တန်တရားတော်ကို မြတ်စွာဘုရားသည် နာမည်ကျော် သာဝတ္တိနိုင်ငံ၊ ဇေတ၀န် ကျောင်းတွင် ရဟန်းတော်များကို ဟောကြားတော်မူခဲ့သည်။
- အတိတ်က ဖြစ်ခဲ့ပြီးတဲ့ ရုပ်နာမ်တွေကို တွေးမနေကြနဲ့။
- အနာဂါတ် ရုပ်နာမ်ကိုလည်း မျှော်လင့်ချက်ထားပြီး လျှောက်တွေးမနေပါနဲ့။
- အတိတ် ရုပ်နာမ်တွေက ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီလေ။
- အနာဂါတ်ရုပ်နာမ်တွေကလည်း ရောက်မလာသေးဘူး။
ပီယတေဇာယတေ သောကော=ချစ်လို့သောက ဖြစ်ရတယ်လို့ မြတ်စွာဘုရားက ဟောကြား ထားခဲ့ပါတယ်၊ မှန်ပါတယ်၊ တစ်ယောက်ယောက်ကို ချစ်မိတာနဲ့တပြိုင်နက် မီးလိုပူလောင်ရ တော့တာပါပဲ၊ ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်မချစ်တော့ ပြန်မချစ်လို့ပူရ၊ ပြန်လည်ချစ်ပြန်တော့လည်း သူများနောက် ဘယ်အချိန်ပါသွားမလဲလို့ တွေးတောမှုတွေနဲ့ ပူလောက်နေကြရပြန်ရော၊ ချစ်တယ်ဆိုတာ အရိယာတွေရဲ့အမြင်နဲ့ဆိုရင် မကောင်းဘူးလို့ပြောရမှာပါ၊
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 5:37 PM No comments:
(၁)စကြာဝဠာ သည် အစဉ်အမြဲ တည်သ လော?
(၂)မတည် သ လော .?
(၃)စကြာဝဠာသည် အကန့် အသတ် ရှိသ လော ?